FIFA oo labo koob adduun qabaneysa sanadka 2022… (Sidee loo kala ciyaari doonaa?) – Gool FM
FIFA oo labo koob adduun qabaneysa sanadka 2022… (Sidee loo kala ciyaari doonaa?)
Haaruun June 23, 2020
(Zuric) 23 Juun 2020. Iyadoo kubadda cagta saameeyn adag uu ku yeeshay xanuunka aafeeyay dunida oo dhan ee coronavirus, haddana xiriirrada FIFA iyo UEFA ayaa si dardar leh isugu dayaya inay beekhaamiyaan jadwalladadii carqaladooway ee kala xirnaanta dunida awgeed ugu guuldarreystay inay sidoodii u qabsoomaan.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa hadda ay FIFA dareen gaar ah ay siineysaa in sanadka 2022 ay qabato labo koob adduun, xilli markii hore lagu balansanaa in dalka Qatar lagu marti galiyo Koobka Adduunka ee 2022.
Madaxweyne Gianni Infantino ayaa horay usoo iqtiraacay in koobka kooxaha adduunka la ballaariyo oo xagaaga 2022 ay ka qayb galaan 24 koox oo ka kala imaanaya dunida dacalladeeda, sidaas darteedna bilooyin kaddib la qabto Koobka Adduunka ee ay xulalku ciyaari lahaayeen.
Xanuunka COVID-19 ayaa si daran u saameeyay jadwallada kubadda cagta, waxaana intaas sii dheer in xaalado ka jira dalka Qatar ay sabab u noqon doonto in jiilaalka la ciyaaro Koobka Adduunka.
Koobka kooxaha adduunka ee la ballaariyay ayaa lagu balansanaa xagaagan, balse waxaa dib loogu dhigay sanadka 2022 in la geeyo, waxaana labo sano kaddib uu ka dhici doonaa dalka China.
Kooxaha 24-ka ah ee ka qayb galaya koobka la ballaariyay ee loo qabanayo kooxaha dunida ayaa waxaa ku xusan in 20 milyan oo euro la siin doono koox walba oo ka soo qayb gasha, halka kooxda tartanka hanatana la siin doono 100 milyan oo euro oo dheerraad ah.
Haddii aysan wax is baddelin, kooxaha qaaradda Yurub ayaa ku lahaan siddeed koox tartankaas, halka kuwa Koonfurta Ameerika ay ku yeellan doonaan lix koox, waxaana boosaska kale ee soo haray kala qaadan doona kooxaha ka socda Waqooyiga Ameerika, Afrika, Aasiya iyo kooxaha ka dhisan dalalka jaziiradaha ku yaalla.
RASMI: Kooxda Manchester United oo heshiiska u kordhisay laacibkeeda khadka dhexe ee Scott McTominay